Ciidamada dowladda howlgalo dad lagu qabtay ka sameeyay Muqdisho | raascasayrmedia.com
← Maraykanka oo sameeyay shucaac looga hortagayo burcad badeeda
Agaasimihii wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda Puntland oo lagu dilay Qarax ka dhacay Gaalkacyo →
April 16, 2011 · 2:15 pm
Ciidamada dowladda howlgalo dad lagu qabtay ka sameeyay Muqdisho
Maamulka gobolka Banaadir ee dowladda KMG Soomaaliya ayaa faah faahin ka bixiyay howlgalo dad lagu qab qabtay oo ciidamada dowladda KMG Soomaaliya ay ka sameeyeen xaafado ka mid ah Magaalada Muqdisho.
Xoghaya guud ee Maamulka gobolka Banaadir ee dowladda KMG Soomaaliya C/kaafi Hillowle Cismaan oo u waramayay Idaacadda Shabelle ayaa waxaa uu ka warbixiyay howlgalo dad lagu qab qabtay oo ciidamada dowladda KMG Soomaaliya maalmihii lasoo dhaafay ay ka sameeyeen degmooyin ka tirsan goobaha ay Maamusho dowladda KMG Soomaaliya.
C/kaafi Hilowlle waxaa uu sheegay in howlgaladaani ay ciidamada dowladda KMG ka sameeyeen degmooyinka ay Maamusho loogu talagalay in lagu xaqiijiyo amaanka degaanadaasi, waxaana uu shaaca ka qaaday in goobaha howlgalada ay ka sameeyeen Ciidamada dowladda ay ka mid yihiin degmooyinka Shangaani, Xamar-weyne, Xamar-jajab, Waaberi qeybo ka tirsan Hodan iyo waliba degmada Boondheere ee gobolka Banaadir.
Xoghayaha gobolka Banaadir aya waxaa uu tilmaamay in intii howlgaladaasi ay socdeen Ciidamada dowladda ay ku qab qabteen ilaa 14-ruux oo ay ku jiraan askar ka tirsan dowladda KMG Soomaaliya oo lagu eedeynayo inay ka dambeeyaan falalka amni daro ee ka dhaca deeganadaasi sida uu hadalka ku dhigay.
C/kaafi Hillowle Cismaan Xoghaya guud ee Maamulka gobolka Banaadir ayaa waxaa uu intaasi raaciyay in degmooyinka ay gacanta ku hayso dowladda KMG Soomaaliya ay u sameeyeen guddi amniga ka shaqeeya oo wax ka qabta sugidda amaanka degmooyinkaasi.
Maalmihii lasoo dhaafay ayaa degmooyinka ay Maamusho dowladda KMG Soomaaliya waxaa lagu arkayay Ciidamo ka tirsan dowladda oo baaritaano isdaba jooga ah ku samaynayay gaadiidka BL-ka iyo kuwa gaarka looleeyahay, iyagoo tilmaamay in arintasi ay tahay mid lagu xaqiijinayo amaanka guud ee degmooyinka ay gacanta ku hayso dowladda KMG Soomaaliya.